Sacuudiga oo sheegey Inuu Wax Ogalaansho ah ka Rabin Maraykan Iyo Waxa Sababey Hadalka Qalafsan
Home Somali News	Sacuudiga oo sheegey Inuu Wax Ogalaansho ah ka Rabin Maraykan Iyo Waxa Sababey Hadalka Qalafsan
Wararka Maanta Caalamka: (somaliyatimes)Waddanka Mareykanka maaha mid u sheegaya sacuudiga waxa uu sameynayo iyo waxa kale , Wasiirka Sacuudiga Khalid al-Falihi aya sidaa u sheegey saxaafada mar waxa laga weydiiyey hadal ka soo yeedhey Donald Trump Oo Ka dhan ahaa wax soo saarka sacuudiga ee saliida.
“Uma baahnin ogolaansho dowlad shisheeye marka ay timaaddo wax soo saarka tamarta
Xubno Ka Tirsan Ururka Petroleum Exporting Countries OO Magacooda Marka La soo gaabiyo Loo Yaqaano (OPEC) Iyo sidoo kale isbaheysiga ganacsiga ayaa kulan ku yeeshey Xurunta OPEC ee Magaalada Vienna 15 Ka tirsan Ururkaasi Iyo Kuwa anan Ka Tirsaneyn ee Uu Kamidka Yahey Wadanka Russia,
ayaa ka wada xaajoon doona hoos u dhigista Wax soo-saarka ee laga yaabo inay bilaabaan bisha Janaayo.
Qiyaasta waxaa loola jeedaa in la xakameeyo sicirka saliidda ee caalamiga ah
Wasiirka Tamarta Sucuudiga ayaa carabka ku adkeeyay inuusan taageeri doonin wixii lid ku ah wax soo sarka saliidda. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu xusay in dhammaan ka qaybgalayaashu dhagaysan doonaan si ay u gaaraan wadaxaajood ku saabsan arrinta.
Horaantii, Sacuudi Carabiya waxay ku boorrisay OPEC iyo xulufadeeda inay xakameeyaan wax soo saarka ugu yaraan 1.3 milyan
Muqdisho Gudoomiye ku xigeenka Arimaha Bulshada aya ka dalbatey Ciidamada Ilaalada,
Faahfaahin dheeraada Oo Ka Soo Baxeysa Qaraxi Lagu Diley + koonfur galbeed iyo xalada taagan.
Mas’ uuliyiin ku dhaawacmey qarax lala beegsadey iyo...
Wararka Maanta Muqdisho Raysal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali...
Faahfaahin dheeraada Oo Ka Soo Baxeysa Qaraxi Lagu...
Halis ka dhalan karta ciidamada ay Qatar maal...
Korneel Caare oo u hanjabay Hargeysa shegey inuu...
Ciidamada somalia oo ka cadheysan mushaar la’aan iyo...